Shir looga hadlayo arimaha Soomaaliya oo maanta Brussels ka furmaya. – Hornafrik Media Network
Shir looga hadlayo arimaha Soomaaliya oo maanta Brussels ka furmaya.
By HornAfrik	 On Jul 16, 2018
Hornafrik-Shir looga hadlaya arimaha Soomaaliya ayaa maanta ka furmaya magaalada Brussels ee Xarunta dalka Belgium-ka, halkaas oo ay joogaan wafdi balaaran oo uu hogaaminayo Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/laahi Farmaajo.
Inta uu socdo shirkan maanta ka furmaya magaalada Brussels ayaa waxaa sidoo kale jiri doono saddex shirar kale oo gooni gooni ah oo lagaga hadli doono maalgashiga, Barakacayaasha iyo kaalinta haweenku ay ku leeyihiin dib-u-dhiska dalka, iyadoona ay ka soo qeyb-gali doonaan dhammaan dhinacyada ka shaqeeya hawlahan sida ganacsatada Soomaaliyeed, maalgashato caalami ah, hey’ado iyo xubno ka tirsan bulshada rayidka ah.
Guluf dagaal aad u xoogan kana dhan ah Al-Shabaab oo socda.!
Deg-Deg Taliyaal Nabad Sugid ah oo shaqada laga joojiyay